Market က Play | November 2019
Android ပေါ်မှာအလုပ် Play စတိုးနှင့်အတူပြဿနာများ troubleshoot
Store ကို Play - ကအသုံးပြုသူများကိုရှာပြီး install အသစ်သောဂိမ်းများနှင့် applications များ, ပြီးတော့သူတို့ကိုမွမ်းမံသူ့ကိုကျေးဇူးတင်သောကွောငျ့ဤသည် Google ကနေ operating system ကို၏သော့ဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်, ဒီဟာ operating system ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုက၎င်း၏အခြေခံ function ကိုဖျော်ဖြေဖို့ငြင်းဆန်, ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ဖို့တာတွေရပ်စဲသည်ကို - ကို download လုပ်ပါနှင့် / သို့မဟုတ် update ကို applications များဖြစ်သည်။
Play Store မှကုဒ် 20 နှင့်အတူဤအမှားပြင်ပေးဖို့
Google ရဲ့ Play Store အား, အားလုံးနီးပါးကို Android-device များအတွက်ပေါင်းစည်းနီးပါးရှာဖွေတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်, download, အ install နှင့် update ကို applications များနှင့်ဂိမ်းများဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခဏဒီစတိုးဆိုင် stably နှင့်ချောချောမွေ့မွေ့ပြေးပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အသုံးပြုသူများသည်နေဆဲအချို့သောပြဿနာများကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မည်။
Play Store မှာကိုးကွယ်ရာကုဒ် 505
"အမည်မသိအမှားကုဒ် 505" - ပထမဦးဆုံး Google ကဗားရှင်း 5.0 Lollipop မှအန်းဒရွိုက် 4.4 ကနေအဆင့်မြှင့်ထုတ်ကုန်ပိုင်ရှင်များ၏ Nexus စီးရီး, ကြုံတွေ့သည့်မနှစ်မြို့ဖွယ်အကြောင်းကြားစာ။ ဤပြဿနာကိုတာရှည်နာမကိုအမှီယနေ့အထိမဖြစ်နိုင်ခဲ့ပေမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှင်းလင်းစွာလိုအပ်ပါက fix ဖို့ရွေးချယ်စရာအကြောင်းပြောဆိုရန်ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ပဉ္စမက Android နှင့်အတူစမတ်ဖုန်းနှင့် tablet များ၏ပျံ့နှံ့၏ခဲ့သည်။
ဆေးတစ်လက် Play စစျေးကွက်ထဲမှာ "ရွှေ့ဆိုင်း Download"
Method ကို 1: အများစုမှာအမှားများကိုမှန်ကန် banal စတင်မှုဟာ gadget ကကူညီပေးပါမည်သည့်စနစ်အတွက်သေးငယ်တဲ့အမှားထဲကနေပျေါပေါကျနိုငျသညျ devices တွေကို Restart ချလိုက်ပါ။ သင့်ရဲ့ device ကို Restart လုပ်ပြီးပြန်လျှောက်လွှာကို download လုပ်ပါသို့မဟုတ် update လုပ်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်။ Method ကို 2: နောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်မှားယွင်းစွာအင်တာနက်ပေါ်ရှိ device ကို operating စေခြင်းငှါတည်ငြိမ်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုတွင်ရှာပါ။
ကို Google Play စန်ဆောင်မှုများအတွက်ဆေးတစ်လက်
ကို Android operating သတင်းအချက်အလက်ပြတင်းပေါက်နှင့်အတူ devices တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှားယွင်းမှုတစ်ခု Google Play ဝန်ဆောင်မှုများလျှောက်လွှာထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကပြောပါတယ်သောအချိန်စနစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဒါဟာအရေးပါတဲ့အမှားမဟုတ်ဘူးကြောင့်မိနစ်အနည်းငယ်ရှိနိုင်ပါသည် fix, စိုးရိမ်ထိတ်လန်မလိုအပ်ပါဘူး။ လျှောက်လွှာကို Google အတွက်အမှားအယွင်းများအမှားဖယ်ရှားပစ်ရရန်န်ဆောင်မှုများ Play အလျောက်, သင်အရိုးရှင်းဆုံးအရေးယူအတွက်ပုန်းအောင်းစေခြင်းငှါအရာဇာစ်မြစ်များ၏အကြောင်းရင်း, သိရှိနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Play Store ကိုအပေါ်ကုဒ် 927 နှင့်အတူအမှားများကိုဆုံးမ
အဆိုပါ Play Store app ကိုမှ update များသို့မဟုတ်ဒေါင်းလုပ်လည်းမရှိသည့်အခါ "မှားယွင်းနေသည် 927" ကိစ္စများတွင်ပုံပေါ်ပါတယ်။ အဲဒါကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတော်လေးဘုံဖြစ်ပါသည်ကတည်းကခက်ခဲသည်မဟုတ်။ "မှားယွင်းနေသည် 927" နဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ Play စတိုးအပေါ်ကုဒ် 927 နှင့်အတူအမှားများကိုသာ gadget ကများနှင့်အချိန်မိနစ်အနည်းငယ်အလုံအလောက်ရှိအလျောက်။
Android ပေါ်မှာကို Google Play စတိုး၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေး
အန်းဒရွိုက်ကို Google နှင့်အတူစမတ်ဖုန်းနှင့် tablet တွင် Store မှာ Play, ရှာဖွေတပ်ဆင်ရန်နှင့် applications များနှင့်ဂိမ်းများအမျိုးမျိုးကို update လုပ်နိုင်စွမ်းကိုထောက်ပံ့ပေးပေမယ့်အားလုံးအသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏အကျိုးခံစားခွင့်တန်ဖိုးမ။ ဒါကြောင့်ဖြစ်စေမတော်တဆသို့မဟုတ်တမင်သက်သက်, ဒီဒစ်ဂျစ်တယ်မဂ္ဂဇင်းကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်, ပြီးတော့မြင့်မားဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူပြုလုပ် restore ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
Play စစျေးကွက်ထဲမှာ "အမှားကုဒ် 963" ကိုပြုပြင်တာတွေ
အဆိုပါစျေးရန် Play စတိုး app ကို အသုံးပြု. အခါသင်ကြုံတွေ့ရပါလျှင် "မှားယွင်းနေသည် 963" မစိုးရိမ်ပါ - ဤအရေးပါသောပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာသိသိသာသာအချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုမလိုအပ်ပါဘူးအများအပြားနည်းလမ်းဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။ ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ် Play ကိုစျေးကွက်အတွက်အမှား 963 ပပျောက်။
Play Store ရှိမှားယွင်းနေသည်ဆုံးမခြင်းကုဒ် DF-DFERH-0
Play Store မှ app များကိုဒေါင်းလုပ်သို့မဟုတ်အပ်ဒိတ်လုပ်သောအခါ, "အမှား DF-DFERH-0" နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်? မစိုးရိမ်ပါနဲ့ - သင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလေ့လာသင်ယူမည်ကိုအနည်းငယ်ရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေဖြေရှင်း။ များသောအားဖြင့်ဒီပြဿနာရဲ့အကြောင်းရင်းကိုကို Google-န်ဆောင်မှုများ၏ပျက်ကွက်ဖြစ်ပြီး, အဲဒါကိုဖယ်ရှားပစ်ရရန် Play စတိုးများတွင်အမှားကုဒ် DF-DFERH-0 Remove ကြောင့်သူတို့နှင့်အတူဆက်စပ်ဒေတာအချို့ကိုရှင်းလင်းသို့မဟုတ် reinstall လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။
အမှားများကို RH အ-01 Play Store ကိုဖယ်ရှား
အဘယ်အရာကို Play Store က service ကိုအသုံးပြုသည့်အခါ "မှားယွင်းနေသည် RH အ-01" ပုံပေါ်လျှင်? Google ရဲ့ဆာဗာများမှဒေတာများလက်ခံရရှိသည့်အခါဒါဟာမှားယွင်းမှုတစ်ခုကြောင့်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အဲဒါကိုပြင်ပေးဖို့, အောက်ကအောက်ပါညွှန်ကြားချက်ကိုဖတ်ပါ။ Play Store မှအမှားကုဒ် RH အ-01 ဆုံးကတော့မုန်း၏ bug တွေကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရကူညီဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။
Google Play Store ထဲမှာအမှား 504 ဆုံး
ကို Android operating system ကို၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ဦးအမြဲမှန်ကန်စွာအလုပ်မလုပ်ပါဘူးအဖြစ် Google ကစတိုးဆိုင် Play ။ တခါတရံ၎င်း၏အသုံးပြုမှုသင်တန်းအတွက်, သငျသညျပြဿနာများ၏အမြိုးမြိုးသို့ run နိုင်ပါတယ်။ သူတို့အနှောင့်အယှက်များနှင့်အမှားကုဒ် 504, ငါတို့ယနေ့ဖော်ပြရန်ရာ၏ဖျက်သိမ်းရေးများထဲတွင်။ အမှားကုဒ်: Play Store ရှိ 504, အမြားဆုံးသတ်မှတ်ထားသောအမှားသင် Google branded applications များနှင့်သူ့ဟာသူအတွက်အကောင့်မှတ်ပုံတင်ရေးနှင့် / သို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်၏အသုံးပြုမှုကိုလိုအပ်သောအချို့ Third-party အစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းသို့မဟုတ် upgrade သည့်အခါတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
ကို Google က Android-device များနှင့်အတူ Store မှာ Play Uninstalling
Google ကတချို့အခြေအနေတွေမှာ, အန်းဒရွိုက်-devices များပိုင်ရှင်တွေ Play ကိုကမ်းလှမ်းနေသော်လည်းအားလုံးအားသာချက်များစနစ်ကနေလျှောက်လွှာစတိုးဆိုင်၏ယာယီသို့မဟုတ်အမြဲတမ်းဖယ်ရှားရေးလိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်စေရန်, အရှိဆုံးကိစ္စများတွင်အသုံးပြုသူ non-စံကိုင်တွယ်နိုင်တဲ့နည်းပညာတွေနှုနျးမှရပါလိမ့်မယ်။
ဒီအမှား Play Store မှ 492 ဒေါင်းလုပ်ရသောအခါ apps များပြင်ပေးရန်
အခြိနျမှနျမှအန်းဒရွိုက်-စမတ်ဖုန်း active အသုံးပြုသူများသည်အမျိုးမျိုးသောအမှားများကိုကြုံတွေ့ရစေခြင်းငှါ, တခါတရံသူတို့က operating system ကို၏ "နှလုံး" ထဲမှာပေါ်လာ - Google ရဲ့ Play Store အား။ အဲဒီချို့ယွင်းချက်တစ်ခုချင်းစီပြဿနာနှင့်၎င်း၏ဖျက်သိမ်းရေးများအတွက်ရွေးချယ်စရာများ၏အကြောင်းရင်းရှာအပေါ်အခြေခံပြီးနှင့်မထား၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကုဒ်ရှိပါတယ်။ တိုက်ရိုက်ဤဆောငျးပါးတှငျ 492 အမှားများကိုဖယ်ရှားပစ်ရရန်မည်သို့အာရုံစိုက်။
Play Store ရှိ "အမှားကုဒ် 905"
Play စ Market ကနေ့တိုင်းလူတွေသန်းပေါင်းများစွာကအသုံးပြုသောကြီးမားသော app store ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးအမြဲတည်ငြိမ်မဖြစ်စေခြင်းငှါ, ရံဖန်ရံခါကအဖြေတစ်ခုကိုရှာဖွေနိုင်သမျှသောအရာကိုသုံးပြီးအချို့သောနံပါတ်များနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောအမှားများကိုပေါ်လာစေနိုင်သည်။ Play Store ရှိ "အမှားကုဒ် 905" ကိုပြုပြင်တာတွေ, 905 အမှားများကိုဖယ်ရှားပစ်ရရန်ကူညီနိုင်မအတော်ကြာရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။
Play Store မှာကိုးကွယ်ရာကုဒ် 403
အဆိုပါက Android operating system ကိုအသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏အလုပ်အတွက်မအောင်မြင်မှုများနှင့်အမှားများကိုအမျိုးမျိုးနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်နေကြတယ်, အခြိနျမှနျမှနေဆဲမစုံလဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အားမနှစ်မြို့ဖွယ်ပြဿနာများများထဲမှ - " ... (403 အမှားကုဒ်) ကိုလျှောက်လွှာကို download လုပ်ပါရန်မအောင်မြင်ခဲ့ပါ" ။ ဤဆောင်းပါး၌အကြှနျုပျတို့ကိုအဘယျသို့ကပေါ်ပေါက်များအတွက်အကြောင်းပြချက်နှင့်မည်သို့ဖြေရှင်းမှထည့်သွင်းစဉ်းစားကြကုန်အံ့။
Play စ Market က configure လုပ်နည်း
ကို Android operating system ကိုအတူ device ကိုဝယ်ယူပြီးနောက်, သင် Play ကိုစျေးကွက်ကနေလိုအပ်တဲ့ application ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ရန်ပထမဦးဆုံးအရာလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်စတိုးဆိုင်အကောင့်အတွက်သောနေရာများအပြင်, နှင့်၎င်း၏ setting များကိုနားလည်ရန်ကိုထိခိုက်စေပါဘူး။ ကိုလည်းကြည့်ပါ: ဘယ်လို Market က Next ကိုတက် Set Play Store ကို Play တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်ကျနော်တို့လျှောက်လွှာများ၏စစ်ဆင်ရေးကိုသြဇာလွှမ်းမိုးသောအဓိက parameters များကိုစဉ်းစားပါ။
က Android OS ကို run နေမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက်သာတရားဝင်ရုံးသုံး application ကိုစတိုးဆိုင် - ကို Google Play Store အား။ အဆိုပါပလီကေးရှင်းများအပြင်၌ဂိမ်း, ရုပ်ရှင်, စာအုပ်, မီဒီယာနှင့်ဂီတပါရှိသည်။ အကြောင်းအရာအများစုဟာအခမဲ့ download ပြုလုပ်မရရှိနိုင်ပါ, သို့သော်ထိုပြည်၌သင်တို့သည်ပေးဆောင်ချင်သောအရာတစ်ခုခုလည်းဖြစ်ပါသည်, ဤအဘို့အကောင့်က Google ငွေပေးချေမှုအားချည်ထားရပါမည် - ဘဏ်ကဒ်, မိုဘိုင်းအကောင့်သို့မဟုတ် PayPal က။
Play ကိုသိမ်းထားဖို့အမှားအယွင်းများ 907 ဖယ်ရှားပစ်တဲ့
Play Store မှ app များကိုဒေါင်းလုပ်သို့မဟုတ်အပ်ဒိတ်လုပ်သောအခါ "မှားယွင်းနေသည် 907" ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဒါဟာအလေးအနက်အကျိုးဆက်များပါဝငျပါဘူး, ဒါကြောင့်အနည်းငယ်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းများဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ပြီးနောက်သင်အောက်ကညွှန်ကြားချက်လုပျနိုငျလျှင်ကိရိယာ reboot ၏ပုံစံအတွက်စံဖြေရှင်းချက် Play Store ကိုအပေါ်ကုဒ် 907 နှင့်အတူအမှားများကိုဖယ်ရှားပစ်ပါသို့မဟုတ်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုရလဒ်များကိုမပေးပါဘူး on / off ကိုဖွင့်ပါ။
Play Store မှာအမှားဆုံးမပဲ့ပြင်ကုဒ် 924
ကိစ္စအများစုတွင် "မှားယွင်းနေသည် 924" ဟုအဆိုပါဝန်ဆောင်မှုများကိုသူတို့ကိုယ်သူတို့အတွက်ပြဿနာများကြောင့် Play Store ရှိပုံပေါ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကိုအောက်တွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်ဟုအနည်းငယ်ရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကျော်လွှားရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ သင်ကဖယ်ရှားပစ်ရဤခြေလှမ်းများပိုမိုလုပ်ဆောင်ထို့နောက်တစ်ဦး "924 အမှား" အဖြစ်ပြဿနာကိုကြုံတွေ့ရပါက Play Store ကိုအပေါ်ကုဒ် 924 နှင့်အတူအမှားများကိုဆုံးမ။
Play Store ကိုပေါ်မှာဤအမှားကုဒ် 491 ပြင်ပေးဖို့
"မှားယွင်းနေသည် 491" ဟုအဆိုပါ Play Store ကိုသုံးတဲ့အခါသိမ်းထားတဲ့အတွက် Google က cache ကိုအမျိုးမျိုးသော data တွေကိုထံမှလျတ်စနစ်အပလီကေးရှင်း၏ရလဒ်အဖြစ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာသိပ်ဖြစ်လာသည့်အခါအခြား application ကိုဒေါင်းလုတ်သို့မဟုတ်အပ်ဒိတ်မလုပ်သောအခါသူကမှားယွင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ပြဿနာတစ်ခုမတည်မငြိမ်အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်အတွက်အခါဒါ့အပြင်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုရှိပါတယ်။